काठमाडौंमा डेंगु फैलँदो! सतर्कता अपनाऔ! तथ्यांक हेर्दा कात्तिक-मंसिरतिर काठमाडौंमा डेंगु देखिने गर्दछ। लेखकले केही समय अगाडिदेखि काठमाडौंमा डेंगु फाट्टफुट्ट देखेको थियो। तर पछिल्लो समय लेखकको सम्पर्कमा आएका डेंगु संक्रमितले आफ्नो बासस्थानतिर डेंगु व्यापक फैलँदै गएको जानकारी दिएका थिए। बुधबार, कात्तिक १७, २०७८
कुकुरको छाउराले टोकेर रेबिज! कुकुर ठुलो वा सानो होस्, टोकेको घाउ ठुलो वा सानो होस् अपरिचित कुकुरले अचानक टोकेमा खोप अनिवार्य लगाउनु पर्दछ। आवश्यक परे चिकित्सकको सल्लाह लिन पनि हिच्किचाउन/अल्छी गर्नु हुँदैन। शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८
पक्षघात किन हुन्छ? लक्षण के–के हुन्? उपचार कसरी गरिन्छ? यदि समय मै मस्तिष्कघात भएको साढे चार घन्टा भित्र अस्पताल पुग्यो मस्तिष्कघात बाट हुने दुरगामी असर र प्यरालाईसिस बाट बच्न सक्छौं। मस्तिष्कघात फेरि नदोरीईयोस् भनेर रगत पातलो गर्ने औषधिहरु दिइन्छ। शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८
लिंगको क्यान्सर हुने कारण, लक्षण र उपचार श्चिमी मुलुकमा लिंगको क्यान्सर दुर्लभ छ तर एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका केही भागहरूमा क्यान्सर अलि धेरै नै देखिने गरेको छ। अधिकांश लिंगको क्यान्सर रोगीहरु ६० देखि ७० बर्षका हुन्छन्। बुधबार, कात्तिक १०, २०७८
छालामा देखिने क्यान्सर कसरी पत्ता लगाउने ? कोठी जस्ता देखिने दागहरुका आकार प्रकार परिवर्तन हुँदै गएमा, कोठी का वरिपरिका सिमा अनियमित देखिएमा, एउटै कोठीको रंगमा पनि भिन्नता देखिएमा, कोठी बढ्दै गएमा, कोठीबाट रगत बगेमा या चिलाउने पोल्ने दुख्ने भएमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। शनिबार, कात्तिक ६, २०७८
उच्च रक्तचाप तथा मुटुका बिरामीको खानपान र जीवनशैली दसैंमा कसरी स्वस्थ बनाउने? आफूलाई अत्याधिक छाती दुखिरहेको छ, धड्कनमा गडबढी भइरहेको छ, दम फुलेरसास फर्ने गाह्रो भइरहेको छ, पसिना आइरहेको छ, छाती भारी भइरहेको छ र यो मुुटरोगको समस्या हो भन्ने शंका लाग्छ भने तुरुन्त नजिकैको अस्पतालमा जानुपर्छ। बिहीबार, असोज २८, २०७८
मानसिक रुपमा कसरी स्वस्थ्य बन्ने? विश्वमा हरेक बर्ष १० अक्टोबरमा मानसिक स्वास्थ दिवस मनाइन्छ। यस बर्षको नारा 'मेन्टल हेल्थ केयर फर अलस् लेट्स मेक इट अ रियालिटी' भन्ने छ। आइतबार, असोज २४, २०७८
कोरोनाको बढी जोखिम नयाँ नोटबाट? हालै बंगलादेशमा (बंगलादेशी नोटमा) गरेको एक अध्यनले पुरानो भन्दा नयाँ नोटमा कोरोनाको भाइरस बढी समय रहने/स्थिर हुने पुष्टि गरेको छ। आइतबार, असोज २४, २०७८
बालबालिकालाई बढी सताउने छालाको रोग 'एटोपिक डर्माटाइटिस' के हो? एटोपिक डर्माटाइटिस भएको छालामा रोग प्रतिरोधात्मक रसायन कम हुने हुँदा ब्याक्टेरिया, भाइरस र ढुसीको संक्रमण हुने गर्दछ। त्यस्तै छालामा पिप जम्ने, रगतमा संक्रमण फैलने, मुटु र दिमागमा संक्रमण फैलने खतरा पनि हुन्छ। मंगलबार, असोज १९, २०७८
मधुमेह: खानपान सम्बन्धी भ्रम र सत्यता सन्तुलित मात्रामा खाना, नियमित व्यायाम, तौलमा नियन्त्रण, तनाव व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ। यी कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सके शरीरमा चिनीको मात्रा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र मधुमेहबाट पनि बच्न सकिन्छ। शनिबार, असोज १६, २०७८
किन हुन्छ हृदयघात? लक्षण र रोकथाम के हो? उपचारको मुख्य उद्देश्य भन्नु नै बिरामीलाई अकस्मात मृत्युबाट बचाउनु र भविष्यमा आइपर्न सक्ने मुटुरोग सम्बन्धी कुनै पनि जोखिमबाट बचाउनु हो। बुधबार, असोज १३, २०७८
जीवनरक्षक 'रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन' सुइ के हो? कस्तो अवस्थामा लगाइन्छ र कस्तोमा लगाउनु हुँदैन? सामान्यतय धेरै तथा गहिरो घाउहरु, हात, टाउको, घाँटी वा संवेदनशील अंगहरुमा टोके 'रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन' सुइ तुरुन्त लगाउनु पर्दछ। मंगलबार, असोज १२, २०७८
दादुरा के हो? कस्ता व्यक्तिहरुलाई दादुरा सर्ने जोखिम बढी हुन्छ? कोभिडको महामारी र लकडाउनका कारण प्रभावित रहेको खोप कार्यक्रमले गर्दा उन्मुलन हुन लागेका दादुरा जस्ता रोगहरु देखिनु हामी सबैमा चासो र चिन्ताको बिषय बनेको छ। सोमबार, असोज ४, २०७८
कोभिड-१९ खोप लगाएपछि के नखाने/नगर्ने? खोप लगाएपछि के गर्ने/नगर्ने वा खाने/नखाने भन्ने जिज्ञासाहरु खोप प्रापकहरुमा रहने गरेका पाइन्छ।नेपालमा त झन् बिरामी हुँदा होस् वा औषधि लिँदा वा खोप लिएपछि यस्ता प्रश्न/जिज्ञासाहरु लगभग सबैमा रहने गरेको पाइन्छ। आइतबार, असोज ३, २०७८
निपाह भाइरस बारे जान्नैपर्ने कुरा निपाह भाइरसको संक्रमण भएमा लक्षणविहीन संक्रमणदेखि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने र तीव्र श्वासप्रश्वासको समस्या हुने गर्दछ। शुक्रबार, असोज १, २०७८
यस्ता हुन सक्छन् डिम्बाशयको क्यान्सरका लक्षण महिलामा पाठेघरको दुईतिर हुने सानो अण्डा आकारको अंगलाई डिम्बाशय भनिन्छ। त्यही अंगमा हुने क्यान्सरलाई नै डिम्बाशयको क्यान्सर भनिन्छ। यो प्रजनन् प्रणालीको एक महत्पूर्ण अंग हो। शनिबार, भदौ २६, २०७८
कोभिड भ्याक्सिनले छालामा देखिन सक्छन् यी लक्षण: डराउनु पर्दैन, सचेत बनौं यसरी जति धेरै मानिसलाई खोप लगाउदै गइएको छ, त्यसरी नै छालामा कोभिड भ्याक्सिनका कारण देखिने समस्याहरु बारे जानकारी दिन र उपचार गर्न जरुरी छ। शुक्रबार, भदौ २५, २०७८
के हो कंगारु मदर केयर? आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा कसरी फाइदा पुग्छ? आमा र शिशुबीचको सम्बन्ध निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। आमा र शिशुबीचको निकटताले दुवैको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। दुवैको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने एक प्रक्रिया हो, कंगारू मदर केयर। बिहीबार, भदौ २४, २०७८
गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिना किन विशेष र जरूरी समय हो? गर्भावस्था एउटा नितान्त प्राकृतिक कुरा हो र प्राकृतिक रूपले हुन दिनु पर्दछ त्यसैले कुनै अप्राकृतिक वा अस्वाभाविक मोड आएमा समयमै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा यो यात्रालाई सुमधूर र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। बिहीबार, भदौ १७, २०७८
गर्भावस्था र स्तनपान गराइरहेका महिलाका लागि कोभिड खोप: यी हुन् जान्नै पर्ने १४ कुरा अमेरिकामा १ करोड ३० लाखभन्दा बढी गर्भधारण गरेका महिलाले यो खोप (खासगरी फाइजर र मोडर्ना) लगाइसकेका छन् र जसमा कुनै किसिमको समस्या देखापरेको छैन। सोमबार, भदौ १४, २०७८
ज्वरो आउनुअघि छालामा देखिन सक्छ कोभिड–१९ का लक्षण कोभिड–१९ का लक्षणहरु मुलतः ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, स्वासप्रश्वासमा समस्या हुने, लगातार दिशा लाग्ने हुन्छ। फोक्सो र शरीरका अन्य अंगहरु निस्क्रिय पार्छ। त्यसै गरी छालामा पनि विभिन्न लक्षण देखिने वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुबाट पत्ता लागेको छ। शुक्रबार, भदौ ११, २०७८
सबैमा खोपको पहुँच नै प्रभावकारी स्वास्थ्य सुरक्षा सरकारले संक्रमणको तेस्रो वा चौथो घातक लहरबाट बच्न खोपलाई प्राथमिकीकरणमा राखी, सबैको पहुँचयोग्य बनाउनु जरुरी छ। सबै विकासको केन्द्रबिन्दु नै जनता हुन। आइतबार, साउन ३१, २०७८
कपाललाई सुन्दर र स्वच्छ राख्न कस्ता कुरामा ध्यान दिने? कपाल स्वस्थ राख्न, पोषकतत्त्व भएको खाना खानुपर्छ, अनिद्राको समस्या आउन दिन हुँदैन। कपालमा जथाभावी स्प्रे गर्ने, स्टेट गर्ने, केराटिन टिटमेन्ट, हेयर ड्राइ गर्ने बानी हटाउनुपर्छ। आइतबार, साउन ३१, २०७८
बालबालबालिकालाई विशिष्टकृत बाल–न्युरोलोजी सेवा कहिले र किन? बालबालिकाहरू मानसिक, शारीरिक, रोग प्रतिरोधात्मक र विकासको दृष्टिबाट वयस्क मानिसभन्दा नितान्त भिन्न छन्। प्रयोगशालाको जाँचबाट आउने नतिजाको निस्कर्ष र औषधिहरूको मात्रासहित बालबालिकाको रोग र उपचारहरू फरक छन्। बिहीबार, साउन २८, २०७८
घुँडा खिइने समस्या: कारण, लक्षण र उपचार बजारमा वाथरोगको दुखाइ सन्चो गर्ने भनी आयुर्वेद औषधिको नाम दिएर अनाधिकृत र गैर आयुर्वेद व्यक्तिले चन्दा भन्ने नाम वा नामनै उल्लेख नगरेका गोलि तथा स्टेरोइड पिसेर दिने गरेको पनि पाइन्छ। बुधबार, साउन २७, २०७८
बालबालिकालाई कति समय मोबाइल/टिभी हेर्न दिने? कोरोनाको महामारी सुरु भएर घर बस्नु पर्ने अवस्था सृजना भएपछि धेरै बालबालिकामा मोबाइल चलाउने बानी झन् बढेर आएको धेरै अभिभावकको गुनासो छ। मंगलबार, साउन २६, २०७८
कोभिसिल्ड र एस्ट्राजेनेकाको खोप एकै हो? नेपालमा "कोभिसिल्ड" प्रचलित नाम हो। जापान सरकारले दिएको एस्ट्राजेनेकाको खोप "कोभिसिल्ड" को पहिलो डोज लगाएर बसेकाहरुलाई लगाउने घोषणा गरेसँगै यसअघि कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकाहरुमा अन्योलता छाएको देखिएको छ। सोमबार, साउन २५, २०७८
'किरा'ले खाँदैमा दाँत फाल्नु पर्दैन दाँत किराले खाइसकेपछि यो एउटा रोग हो। सुरुकै अवस्थामा छ भने फ्लोराइड भएको मञ्जनको प्रयोग गरी ब्रसले सफा गर्न सकिन्छ। आइतबार, साउन २४, २०७८